ဘာကြောင့်‌ ငွေစုကြသလဲ? စနစ်တကျ ငွေ ဘယ်လိုစုမလဲ
Saint Sandy Htet•4months ago
ချွေတာစုဆောင်း သူဌေးလောင်းဆိုသလို ငွေစုခြင်းဟာ လက်ရှိအတွက်ရော အနာဂတ်အတွက်ပါ အရေးပါတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အနာဂတ်မှာ ကြိုမသိနိုင်တဲ့ အရေးပေါ်ငွေကြေးပြဿနာတွေ ပေါ်ပေါက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် စုဆောင်းထားတဲ့ ငွေတွေက အများကြီးအထောက်အကူပြုနိုင်မှာ ဖြစ်လို့ပါပဲ။ ဒါ့အပြင် ငွေစုဆောင်းထားခြင်းကြောင့် အနာဂတ်မှာ တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ဝယ်ယူတာ၊ ငွေကြေးကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်တာ၊ ကြွေးမြီကင်းစင်နိုင်တာ စတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်း ရနိုင်ပါသေးတယ်။
ငွေစုဆောင်းတယ်ဆိုတာ ငွေ သုံးစွဲတဲ့အခါ နှမြောတွန့်တိုစွာ သုံးပြီး ရသမျှ ခြစ်ကုပ် စုဆောင်းရမှာကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ ဝင်ငွေတွေထဲက ပိုလျှံနေတဲ့ ငွေတွေရယ်၊ မကုန်သင့်ဘဲ ကုန်နေတဲ့ ငွေတွေကို သီးသန့် ဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီး စုငွေအဖြစ်ထားရှိဖို့ကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်က ငွေစုတဲ့အခါ နောင်ရေးအတွက် စိတ်အေးရဖို့၊ကိုယ်လို ချင်နေတဲ့ ပစ္စည်းလေးဝယ်နိုင်ဖို့ စတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လေးတွေနဲ့ စုမယ်ဆိုရင် ပုံမှန်ငွေစုဖြစ်ဖို့ တွန်းအားတစ်ခုရနိုင်ပါသေးတယ်။ငွေကြေးအမှီအခိုကင်းကင်းနေနိုင်အောင်ရော အရေးပေါ်အခြေအနေတွေ အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်အောင်ရော အခုကတည်းက စပြီး ငွေစုဖို့ လိုအပ်ပါတယ်နော်။
ငွေစုမယ့် အကြောင်းအရင်းလည်းရှိပြီ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လို ငွေစစုရမလဲ?
ငွေစုဖို့ လွယ်လွယ်ကူကူ နည်းလမ်းတွေရှိတဲ့ အထဲက တစ်ချို့ကို ဒီဆောင်းပါးထဲမှာ ရွေးချယ်ပြောပြပေးသွားပါမယ်နော်။
ကိုယ့်ရဲ့ စုစုပေါင်းဝင်ငွေ၊ မဖြစ်မနေအသုံးပြုရမယ့် ထွက်ငွေစာရင်းကို တိတိကျကျသိထားဖို့လိုပါမယ်။
တစ်လစာဝင်ငွေရယ် တစ်လစာကုန်မယ့် အသုံးစရိတ်တွေကို ကြိုတင် ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားပြီး တစ်လတာ သုံးမယ့် ဘက်ဂျက်ပလန်ရေးဆွဲရပါမယ်။
ဒါဆိုရင် မလိုအပ်ပဲ သုံးဖြစ်နေတဲ့ ငွေယိုပေါက်တွေကို စီစစ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး အဲဒီငွေတွေကို မသုံးဖြစ်တော့ဘဲ စုဆောင်းထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အကျိုးရှိရှိ ငွေစုနိုင်ဖို့ ဒါတွေ လုပ်ပါ။
အဓိကနဲ့ အရေးကြီးဆုံးကတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စည်းကမ်းချမှတ်ဖို့ပါပဲ။ ငွေကို သေချာ စုဆောင်းနိုင်ဖို့ ကိုယ်ကိုတိုင်က ဒီလို စည်းကမ်းလေးတွေအတိုင်း လိုက်နာလုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါမယ်။
ဝင်ငွေရဲ့ အနည်းဆုံး (၁၀%)ကို စုဆောင်းပါ။
အရင် ငွေစုပြီးမှ ကျန်တာကို သုံးပါ။
လိုချင်တာနဲ့ လိုအပ်တာခွဲခြားပြီး သုံးပါ။
ဒီလို အချက်လေးကို လိုက်နာပြီး နည်းစနစ်ကျ စုဆောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်မျှော်မှန်းထားတဲ့ အချိန်အတွင်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ ငွေကြေးပမာဏ ပြည့်မြောက်နိုင်ဖို့ သေချာသလောက်ရှိသွားပါပြီ။
စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေအနေနဲ့ ပမာဏနည်းတယ်၊များတယ်မခွဲခြားဘဲ ကိုယ်စုနိုင်မယ့် ပမာဏကနေ စတင်ပြီး ငွေစုဆောင်းတဲ့ အလေ့အကျင့်ကို ပျိုးထောင်ကြဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။အနာဂတ်အတွက် စိတ်အေးရဖို့၊ အရေးပေါ်ငွေကြေးအခက်ခဲတွေကို အခက်အခဲမရှိ ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ အတွက် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အခုကစပြီး ငွေစုဆောင်းဖို့ ပြင်ဆင်ကြပါလို့ ပြောရင်း ဒီဆောင်းပါးလေးကို အဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေ။